बीपीलाई फाँसी दिइन्थ्यो भने ?
२०७५ पौष १९ बिहीबार ०७:२०:००
जननायक बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर आफ्ना पाँच सहकर्मीसमेत स्वदेश फर्कँदा केही कुनाबाट उहाँको कदमको निकै विरोध गरियो । आठ वर्ष जेलमा बन्दी बीपी रिहाइपछि राजनीतिक प्रवासमा आठै वर्ष भारतमा रहनुभयो । त्यसपछि राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्कँदा उहाँमाथि आठवटा मुद्दा थिए । ती मुद्दामा फसाएर बीपीलाई फाँसीको सजाय दिने तानाबाना त्यतिबेलाको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले बुनिरहेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था राजाको सक्रिय नेतृत्वमा स्थापित र सञ्चालित थियो ।
जीवनभर संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा अडिग बीपीलाई २०३३ पुस १६ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै पहिले आठबर्ष बन्दी बनाइएको सुन्दरीजल जेलमा लगेर पुनः थुनियो । जनताका नेता र जनताकै लागि राजनीति गर्ने मानिसको लागि राजशाहीले खडा गरेको दुर्दशा थियो यो । बीपीसँगै आउनुभएका गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाई र निलाम्बर पन्थीसमेतलाई पक्रेर जेलमा बन्दी बनाइयो । विमानस्थलको उत्तर पश्चिमी ढिस्कोको हुलमा उभिएर बीपीलाई देख्ने रहरमा आँखा तन्काएर उभिएको म उहाँ पक्राउ परेको आबाज कानमा ठोक्किएपछि निराश फर्किएको थिएँ । गोवर्धन शर्मा पोखरेल हुदै तनहुँसम्म जोडिएको यो प्रसंग अन्त कतै सान्दर्भिक होला ।
पञ्चहरुले आफ्नो सत्ता सयलमाथि चुनौती मानेर बीपीको स्वदेश वापसीको चर्को विरोध गरे । उहाँलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतबाट समेत पारित गर्ने हुइँया चलाइयो । अर्कातिर, कम्युनिस्टहरूले पनि भएभरको शक्ति लगाएर राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको विरोध र आलोचना गरे । राष्ट्रियताको संरक्षण र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार पुनस्र्थापित गर्ने मान्यताले लिइएको नीति र बीपीको वापसीलाई स्वघोषित देशभक्त र जनताको राजनीति गरेको दाबी गर्ने कम्युनिस्टले पञ्चहरू नै बलियो हुनेगरी विरोध गरे ।
देशभित्र ठूलो विरोध र आलोचनाको वातावरण बनाउने कोसिस भएको थियो । यस्तो हुन्छ भन्ने बीपीलाई थाहा थियो । फाँसीसम्म हुनसक्ने अनुमान थियो । गणेशमान सिंहले स्वदेश वापसी कारणसहित मृत्यु समान भन्नुभएकै बेला बीपीले त्यसपछिको भारत बसाई ‘मन्द विष’ बाट (स्लो प्वाइजन) मृत्युवरण जस्तै हुने बताउनुभएको प्रसंगले यसको पुष्टि हुन्छ । सहकर्मी कार्यकर्तासँग भेटघाट र अन्य माध्यमबाट आफ्नो नीति र वापसीबारे बीपीले परामर्श गर्नुभएको थियो । कमैले उहाँलाई वापसीको सल्लाह दिए । तर, बीपीले उनीहरूलाई बुझाउनुभयो । यहीबीच विभिन्न कोणबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाले उहाँलाई सम्भावित विरोध र आलोचनाको पारो थाहा भइसकेको थियो ।
स्वदेश फर्कनेबित्तिकै जेल जानुपर्ने कुरा उहाँको अनुमानभन्दा बहिर थिएन । त्यो सरकारी सत्ता अप्रजातान्त्रिक थियो र त्यसैविरुद्ध उहाँको संघर्ष थियो । फाँसी पनि हुनसक्छ भन्ने त अघिका छलफलकै क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो ।
यत्रो खतरा उठाएर वा बुझेर पनि उहाँ किन नेपाल फर्किने निर्णयमा पुग्नुभयो ? उहाँको निर्णयमा सत्ताको अपेक्षा र सुविधाको आग्रह थियो र ? थिएन । हुँदो हो त, बीपीले जेल, नेल र प्रवास रोज्नुहुन्थेन । राजासँग समर्पण वा भारतको इच्छापात्र बनेर उहिल्यैदेखि सत्ताको धुरीमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो । बीपीले जीवनभर संघर्षको बाटो रोज्नुभयो । किन ?
बीपीले राजनीतिमा जनता र देशलाई केन्द्रमा राख्नुभयो । जेल, प्रवास र सत्ता सिर्जित असह्य यातना यही उद्देश्यका लागि रोज्नुभयो । हामीले पाएको प्रजातन्त्र चेतनाका लागि बीपी र उहाँको पुस्ताले चुकाएको अमूल्य मूल्यको परिणाम हो । आठ वर्षपछि के त्यस्तो कारण भयो त ? उहाँलाई नेपाल फर्किन ?
पहिलो, बीपीसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि प्रवासी भयो । त्यो आन्दोलनलाई स्वदेशमै ल्याउनु थियो । दोस्रो नेपाली राष्ट्रियतामाथि उत्पन्न हुनसक्ने खतराको अनुभूति उहाँमा भएको थियो । राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका सन्दर्भमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारका दस्ताबेजहरुको अध्ययनबाट यो मर्म स्पष्ट हुन्छ ।
शक्ति राष्ट्र (अमेरिका र रुस) ले सिर्जना गरेको ध्रुवीकरण वा शीतयुद्ध, अफगानीस्तानमा रुसको हस्तक्षेप, पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तान बीचको लडाइँले जन्माएको बंगलादेश, सिक्किम भारतमा विलय, भारतमा संकटकाल आदि त्यस बेलाका यस क्षेत्रका परिघटना थिए । र यिनको दुष्प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने लक्षण र राष्ट्र नै खतरामा पर्ने ठम्याइमा पुग्नुभएका बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिबाट देश बचाउन राजालाई सहयोग र सबैलाई सन्देश दिनुभएको हो । तत्कालीन भारतीय सत्ताले उहाँप्रति स्वार्थी घेराबन्दी बढाएको थियो । यो कुरालाई अहिले आएर नेपालको राजनीतिक समाजले जसरी बुझेको छ त्यतिबेलै यसरी बुझेको भए परिस्थिति सायद अर्कै मोडमा हुनेथियो ।
राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको अर्थपूर्ण देशभक्तिको भनाइलाई बीपीले राजासँग समर्पण गरेको भन्ने हलुका हल्ला मच्चाएर मेलमिलाप नीतिको खिल्ली उडाउने प्रयत्न यहाँ भयो । खासगरी अहिले सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरुबाट ।
मेलमिलाप नीति राजासँग आत्मसमर्पण पनि होइन र प्रजातन्त्र छोड्ने कुरा पनि हुँदैन बीपीले स्पष्टैसँग भन्नुभएको थियो । जनता सर्वोपरी हुने संवैधानिक शासन बीपीको उद्देश्य थियो । जनता नचाहिने राजालाई जनताले पनि चाहदैनन् ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’ शीर्षकको किताबमा बीपीले भन्नुभएको छ ।
बीपी स्वदेश फर्किएको दुई वर्षभित्रै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोलाई त्यहाँको सैनिक सत्ताले फाँसी दियो । सैनिक अधिनायक जनरल जियाउल हकले निर्वाचित भुट्टोलाई सत्ता च्युत गरी त्यहाँ सैनिक शासन लागु गरे र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई बेवास्ता गर्दै भुट्टोलाई फाँसीमा चढाए ।
यसको केही पहिले नेपालमा नेपाली कांग्रेसका योद्धा भीमनारायण श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर थापालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । बीपीकै निर्देशनमा काम गरेका योद्धाप्रतिको यो निर्मम घटनाबाट नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपीलाई पनि फाँसी दिइने भय जनतामा थप उत्पन्न थियो । पाकिस्तानी उदाहरण भयको अर्को थप कारक बन्यो । बीपी र गणेशमानलाई आठ, आठ मुद्दा लगाइएको थियो ।
बीपीको जीवन रक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली जनताको राजा वीरेन्द्रमाथि व्यापक दबाब थियो । खासगरी भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलगायतको दबाब बीपीलाई बचाउन उपयोगी रह्यो । अस्वस्थ हुँदाहुँदै जयप्रकाश नारायण बीपीलाई बिदा गर्न पटना विमानस्थल पुगेका थिए । देख्नेहरु लेख्छन् र भन्छन् – सहकर्मीसहित काठमाडौं आउन बीपी चढेको विमान जयप्रकाश नारायणले आँसु भरिएका आँखाले भेटुन्जेल आकाशतिर फर्किएर हेरिरहे । विश्व समाजवादी आन्दोलनको उपाध्यक्ष बीपीप्रति विश्वव्यापी समर्थन थियो ।
छिमेकीमित्र मुलुकको जननिर्वाचित प्रजातन्त्रवादी प्रथम प्रधानमन्त्री, विश्व समाजवादी नेता र आफ्ना बाबु जबाहरलाल नेहरुको साथी बीपी कोइरालाप्रति भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी किन अनुदार र कठोर बनिन् ? उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, बीपी र नेपाली कांग्रेसलाई गरेको अपमान वा घेराबन्दी सह्य भएन । क्षेत्रीयरूपमा भएका घटना, सम्भावित बबन्डर र इन्दिरा गान्धीको सत्ता उन्मादले नेपालमा पर्ने असरको पूर्वानुभूतिको जगमा बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति प्रतिपादन गर्नुभएको स्पष्ट छ ।
सिक्किम विलयको तानाबाना सफल बनाएकी इन्दिरा गान्धीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकृत गरेका कारण नै उनी बीपीप्रति कठोर भएको प्रसंग चर्चामा आएकाछन् । जतिबेला भारतमा इन्दिरालाई ‘दुर्गा’ भन्न थालिएको थियो । पृष्ठभागमा भारतको छायाँ नक्सा र सिंहवाहिनी दुर्गामाताको आकृतिमा इन्दिरा गान्धीको स्वरुप प्रतिविम्बित गरिएका पोस्टर र कार्टुन बनाइएका थिए । इन्दिरालाई दुर्गा भन्ने भारतीय जनता पार्टी (तत्कालीन भारतीय जनसंघ) का नेता अटलविहारी बाजपेयीको उनीप्रतिको मोह त्यतिबेला भंग भयो जतिबेला इन्दिराले आपातकाल (इमर्जेन्सी) लागु गरिन् र विरोधी नेतालाई जेलमा पुर्याइन् । ‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’ भनिएको थियो । इन्दिरा गान्धीको बढ्दो अनुदार राजनीतिको विरोधको नेतृत्व गर्ने जयप्रकाश नारायणसँग बीपीको मित्रता पनि इन्दिराका लागि रुचिकर भएन । भनिन्छ – आफ्नो विरोध नगर्न जयप्रकाशलाई सम्झाइदिन इन्दिराले बीपीलाई भनेकी थिइन् तर बीपीले इन्दिराको चाहना अनुसार गर्नुभएन ।
प्रचण्ड शक्ति र समर्थनजनित सत्ता उन्मादमा नेपालको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र यसैका लागि समर्पित विश्व हैसियतका नेता बीपीप्रति इन्दिराको हेराइ पक्कै सकारात्मक रहेन । लाग्छ, नेपाललाई हेर्ने सिक्किम प्रेरणा थियो इन्दिरामा । यही बुझेर बीपीले नेपालको स्वतन्त्रता रक्षा गर्न र स्वतन्त्रतामाथिको सम्भावित चुनौतीको प्रतिरोध गर्न राष्ट्रिय मेलमिलापको मार्गबाट स्वदेश आउनुभयो ।
यहाँ एउटा प्रसंग अत्यन्त उल्लेखनीय छ । जननायक बीपी कोइराला मेमोरियल ट्रष्टले अस्ति पुस १६ गते आयोजना गरेको ४३ औँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका प्रमुख अतिथि केदारभक्त माथेमाले सिक्किमका नेताहरुलाई बीपीले दिएको सुझाव स्मरण गराउनुभयो । बीपीलाई भेट्न आएका केही सिक्किमी नेताले आफूहरु प्रजातन्त्र स्थापना गर्न लागेको बताएका र बीपीले – ‘‘प्रजातन्त्र स्थापना गर्नोस् तर राजा नफ्याक्नु होला, त्यसो भए सिक्किम नरहने’’ सुझाव दिनुभएको थियो माथेमाले कार्यक्रममा भन्नुभयो । भविष्यद्रष्टा बीपी सही ठहरिनुभयो । बीपीलाई जननायक भन्नुको औचित्य पनि माथेमाले त्यहाँ त्यसरी नै प्रस्तुत गर्नुभयो, जसरी बीपीलाई महामना भन्नुको औचित्य अभि सुवेदीले लेख्नुभएको थियो । यो विषय अर्कै प्रसंगमा ।
इन्दिरा गान्धी बाध्य पारेर बीपीलाई आफ्नो प्रस्ताव मान्ने नत्र नेपाल फर्किन पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्थिन् । नेपाल फर्किएका बीपीलाई फाँसी होस् भन्ने उनको भित्री चाहना थियो ? फाँसीपछि उत्पन्न हुने तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया (विश्व समाजवादी आन्दोलनको समेत) र नेपालमा हुने आन्दोलनको छिद्रबाट इन्दिरा भारतलाई नेपालमा घुसाउन चाहन्थिन् ? यस्ता प्रश्नहरु निरुत्तरित छैनन् । तिनको एकमुष्ठ जबाफ राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति नै हो ।
अदालत समक्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हतियारबद्ध वा शान्तिपूर्ण पूरै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबै घटनाको नैतिक दायित्व लिएर कार्यकर्ता बचाउने बीपीलाई धन्न मृत्युदण्ड दिइएन । जनकमान श्रेष्ठको न्यायिक इजलासले बीपी र गणेशमान दुवैलाई बचायो । नेपालका केही पञ्च र कम्युनिस्टबाहेक विश्व नेता वा जनमत र नेपाली जनता मृत्युदण्ड या फाँसीको विरुद्ध मुखर थिए । सायद, राजा वीरेन्द्र पनि बीपीलाई फाँसी नै होस् भन्ने मनसायमा थिएनन् कि ?